MacOS High Sierra တွင်အမည်မသိ developer များထံမှအက်ပ်များကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
MacOS High Sierra တွင်အမည်မသိ developer များထံမှအက်ပ်များကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Ignatius ခန်းမ | | MacOS အမြင့် Sierra, လဲ tutorial
Mac ကွန်ပျူတာများ၏ operating system ကိုအမြဲတမ်းဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်ခံရနိုင်ခြေအနည်းဆုံးသော operating system တစ်ခုမှအမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်အတန်ကြာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့နဲ့ Macs ဟာနေရာတိုင်းမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ ဟက်ကာများလည်း macOS ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်.
Apple က၎င်းကိုသတိထားမိပြီး၎င်းတို့အားအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် အမည်မသိ developer များထံမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်ရွေးစရာကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် Apple ပရိုဂရမ်တွင်ကဲ့သို့ Mac App Store တွင်မပေါ်ပေါက်သည့်မည်သည့် application ကိုမျှတပ်ဆင်။ မရပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းက MacOS Sierra ကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ High Sierra လို့ခေါ်တဲ့ macOS ဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်တူထပ်မျှကန့်သတ်ထားသည် မည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်၎င်းကိုကျော်နိုင်သည်။ မသက်ဆိုင်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်၏။ ဤပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည့်အခါ application ၏မူလအရင်းအမြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါက Mac ၏လုံခြုံရေးသာမကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၏သမာဓိကိုလည်းပါအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အမည်မဖော်သော developer များထံမှအက်ပလီကေးရှင်းများကို MacOS High Sierra တွင်တပ်ဆင်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ terminal ကိုသွားရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Anywhere option ကိုထည့်သွင်းဖို့ system system configuration ကိုမလုပ်နိုင်လို့ပါ။
Terminal ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ အောက်ပါ command ကိုရေးပါမည်။ sudo spctl –master-disable လုပ်ပါ
Master ရှေ့တွင် dash နှစ်ခု (-) တစ်ခုမရှိပါ။
ပြီးရင် Finder ကို Killall Finder နဲ့ restart လုပ်လိုက်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ System Preferences> Security နှင့် Privacy သို့သွားပြီး Allow applications များမှ Anywhere option ကိုဖွင့်နိုင်သည် -
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » MacOS High Sierra တွင်အမည်မသိ developer များထံမှအက်ပ်များကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ကောင်းပြီ, Nacho ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ငါ HS ကိုအဆင့်မြှင့်တော့မယ့်အချိန် "ဘာပြproblemsနာတွေ" ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုမကြည့်ခင် ...
Mac (၂၁.၅ လက်မ၊ Late 21,5) 2013 GHz Intel Core i2,7 ။ 5GB 8MHz DDR1600 ။
ဟယ်လို၊ ကျွန်တော့်မှာ ပြဿနာတစ်ခု ရှိနေပြီး စကားဝှက်ကို ထည့်လိုက်တာက မှန်ကန်တယ်လို့ မယူဆပါဘူး၊ (ဒါဆို စကားဝှက်ကို ရေးတာ အမှားအယွင်း တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး)။
wd ကို အကြောင်းပြန်ပါ။
iStat Menus 6၊ ဤအသိပေးချက်ဘား၏ဗားရှင်းအသစ်တိုးတက်မှုများစွာရှိသည်